MZ ကို iPad မှာ မြန်မာစာလုံးပေါ် — MYSTERY ZILLION
MZ ကို iPad မှာ မြန်မာစာလုံးပေါ်
MZ ကို iPad 1 မှာ မြန်မာစာ ပေါ်ပြီး iPhone 4S နဲ့ Android ICS မှာ မပေါ်တာလဲ။ သုံးခုစလုံး jailbreak မဟုတ်ဘူး။ native browser ပဲ သုံးပါတယ်။
ipad မှာက ပုံမှန် theme ကို သုံးထားပါတယ်။ မူရင်း theme မှာ font embed ထည့်ထားပါတယ်။
iphone 4s မှာက mobile theme ကို သုံးထားပါတယ်။ font embed နဲ့ css မပြင်ထားရသေးပါဘူး။ ပြင်ပြီးပေမယ့် vanilla ကို update လုပ်လိုက်တိုင်း ပြန်ပြန်ပြင်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုနောက်ဆုံး version မှာ မပြင်ရသေးပါဘူး။
Android ICS မှာ font embed အလုပ်မလုပ်ပါ။ 4.0 နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Android OS version4ဖြစ်ခဲ့ရင် font embed ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ mmwebfonts မှာ ပြန်ပြင်ဖို့ လိုပါတယ်။
For android use Mozilla Aurora to read unicode font embed site.
cool! OK . I will support Mozilla Android in mmwebfonts.
Thank for your information @IT_KOKO
fixed MZ iphone font problem.
I like iphone font. it is better anti-aliasing and pleasing to eye.